1. Umkhosi wenjabulo useduze nokuphela konyaka. Abantu abaningi balungiselela izipho zikaNcibijane. Ukuthi uzenzele wena uqobo yini Noma thenga izipho ozonikeza obathandayo Futhi omama abaningi kungenzeka balungiselela izipho izingane zabo ukuthi zihlanganyele nobumnandi nabangane esikoleni.Namuhla, sinendlela yokugoqa ibhokisi lesikwele. Njengesipho noma ukuhlobisa ikona likaKhisimusi elingeyona inkimbinkimbi Futhi kunikeza umuzwa owanelisa kakhulu kubo bobabili umuphi kanye nowemukelayo.
2. Izinsiza kusebenza Ungasonga kanjani ibhokisi lesikwele
3. - Ukugoqwa kwesipho Khetha ngendlela esithanda ngayo noma ehambelana nesitayela salowo onikelayo. Kwabadala, khetha imibala elula, yezingane, amaphethini wekhathuni. Noma amaphethini amahle anemibala - iminsalo noma amaribhoni, khetha ngendlela ehambelana nombala wephepha. Kungaba ithoni efanayo noma ukusikwa kombala, abanye abantu basebenzisa izimbali ezomisiwe, izimbali ezintsha, noma okulula ukuzenzela ngokwakho, kumane kuyindlela enhle. Ingasetshenziswa Kepha uma kungokwezivakashi ezindala noma umphathi, kungahle kudingeke ukuthi ukhethe ibhokisi elilula ngombala, ngokuya kwesikhathi nokufaneleka.
4. Izindlela ezilula zokugoqa isikwele noma ibhokisi lesipho
5. - Beka ibhokisi lesipho ephepheni lokugoqa elisikiwe. Futhi beka amakhona ebhokisi ezinhlangothini zombili, ahlukaniswe ngokulingana ezinhlangothini ½ zebhokisi elisetshenzisiwe nangaphezulu ¼ kwebhokisi njengoba kukhonjisiwe esithombeni sokuqala, okumele sisike imiphetho yobukhulu obufanayo. Ukucoceka nobuhle Ngosayizi webhokisi esilikhethayo - Thatha iphepha ukumboza uhhafu webhokisi. Bese unamathela i-glue noma itheyiphu emaceleni amabili - Letha olunye uhlangothi lwephepha lisongwe kanye ne-glue. Noma ingcina enamacala amabili - itheyiphu futhi yokuqina nokuqiniseka Vele hhayi ukuwa. Cindezela phakathi nendawo ukuze ulingane emaphethelweni. Songa imiphetho kahle - bese usebenzisa njengasesithombeni Namathisela itheyiphu esobala - bopha amaribhoni ngaphesheya njengesithombe. Noma abanye benu kungenzeka bangayigqoki ngokuya ngokuncamelayo nobuciko benu.- Bopha umnsalo wezimbali ezomisiwe noma izimbali ezintsha ngokuya ngokuthanda komuntu ngamunye.
6. Imihlobiso emihle yamabhokisi ingeza umbala nenjabulo emndenini.
7. Ngesikhathi sikakhisimusi Amabhokisi angagoqwa ngosayizi nemibala ehlukene bese efakwa ngaphansi kwesihlahla. Noma faka izipho eziningana ngaphakathi kwebhokisi ukuze izingane zijabule zivula isipho ezisitholile. Cabanga nje ube noSanta Claus. Letha izipho Ukujabulisa okuningi Futhi nokwenza onodoli bekhaya nomndeni ngenye indlela Lokho kungenziwa wedwa ngendlela elula kakhulu Yenziwe ngothando Umamukeli uzothola ukunakekelwa nokuthakazelelwa. Futhi nokudalwa okungenamkhawulo futhi Ngemuva kwalokho, masikulungele ukwenza ibhokisi lesipho njengathi !!